एटिएम सञ्चालनको ५ दशकमा भएका परिवर्तनहरु - सिम्रिक खबर
एटिएम सञ्चालनको ५ दशकमा भएका परिवर्तनहरु
File Photo, TET
काठमाडौ, एजेन्सी ।
एटीएम जस्ता साधारण मेसिनले पैसा हामीलाइ दिन्छ । के तपाइलाइ थाहा छ यसको सुरुवात कहाँ र कसरी भएकोे थियो । जसले गर्दा बैंकको क्षेत्रमा यतिका धेररुै परिवर्तन पनि आयो ? एटिएमको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो । तर केही तथ्यहरुले अमेरिकामा सन् १९६९ बाटै पहिलो पटक शुरु भएको पनि भन्छन् । तर त्यसको दुइ बर्ष अघि नै लण्डनमा यो मेसिन जडान भएको थियो । १९६७ मा लन्डनमा बार्कलेज बैंकको शाखामा एटीएम स्थापना गरियो। एटीएमको स्थापना भएदेखि, मेशिनमा धेरै परिवर्तन गरिएका छन्, ती परिवर्तनहरू के हुन् ? यहाँ चर्चा गरौ ।
लन्डनको बार्कलेज बैंकका एटीएमहरूलाई डे ला र्यू स्वचालित क्यास सिस्टम वा डीएएक्स भनिन्थ्यो। यो एटीएम जोन शेफर्ड ब्यारनको टोलीले निर्माण गरेको हो। यसमा, लेनदेनको लागि कागजकोे चेक भित्र घुसाउनु पथ्र्यो । योे कागज बैंकका क्यासिएरले दिने गर्दथे । यो कागजमा कार्बन १४ चिन्ह लगाइएको थियो जसले गर्दा मेशिनले यसलाई पढ्न सक्दछ। यो चिन्हमा कागजको सुरक्षा पनि थियो, पछि यो कागजलाई छ अंकको पिन नम्बरमा रूपान्तरण गरियो। लन्डनमा सुरू गरिएको एटीएमहरू यस्ता थिए ।
कार्डकोे सुरुवात- लन्डनमा एटीएमहरू प्रयोग गरेपछि, स्पीच र मिडल्याण्ड बैंकले एक मेसिन निर्माण ग¥यो। यस मेशिनले भौचरको सट्टा टोकन र कार्ड प्रयोग ग¥यो। यस कार्डको पछाडि चुम्बकीय पट्टी प्रयोग गरिएको थियो। यस कार्डले कार्बन १४ को प्रयोग गरी जोखिम रोक्नको लागि चुंबकीयता पनि प्रयोग ग¥यो।
कोड राख्ने प्रणालीको सुरुवात – १९६५ मा कार्डमा पिन राख्ने विचार भइरहेको थियो। त्यसलाइ प्रयोगमा ल्याइयो पनि । यस पछि, यो कार्ड १९७० को दशकमा धेरै चल्यो, तर सेप्टेम्बर २, १९६९ मा, आधुनिक कार्ड अमेरिकामा पहिलो पटक प्रयोग भयो। न्यू योर्क मेशिन पहिलो आधुनिक एटीएम मानिन्छ। यस कार्डको विशेषता यो थियो कि जब ग्राहकले एटीएम मेशिनमा विशेष कोडको कार्ड राख्थे, एक समयमा त्यसबाट निश्चित रकम मात्र बाहिर आउँथ्यो। भनिन्छ कि यो मेशिनको विकास सजिलो काम थिएन, यसका लागि कडा परिश्रम र अनुसन्धान गरिएको थियो।
माइक्रोप्रोसेसरमा आधारित मेशिन-७० को दशकमा माइक्रोप्रोसेसरमा आधारित मेशिन निर्माण हुन थाले । त्यसपछि हार्डवेयर सुरक्षा मोड्युल बन्यो । यो मोड्युल अटाला बक्सको रूपमा परिचित भयो। यो एउटा सुरक्षा प्रणाली थियो जसमा कोड गरिएको पिन र एटीएम सन्देश राखिएको थियो। यस मेशिनमा, ग्राहकले कोड राखेपछि त्यो कोड रुपान्तरण भएर क्याशियरसामु पुग्ने गर्दथ्यो । यसबाट मेशिनले ग्राहकको खाता नम्बर पनि जान्दछ, उही प्रक्रिया आधुनिक एटीएममा काम गर्दछ। १९७९ मा एटीएमसँग समन्वय गर्न प्रयासहरू सुरु भए। २०१२ मा, रोयल बैंक अफ स्कटल्यान्डले एक यस्तो व्यवस्था प्रदान ग¥यो जुन ग्राहकले आफ्नो कार्ड प्रयोग नगरी ६ अंक प्रयोग गरेर पैसा फिर्ता लिन सक्ने थिए ।नेपालमा एभरेष्ट बैंकले पहिलो पटक एटिएमको सुरुवात गरेको थियो । २००५ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा पहिलो पटक यस बैंकले एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।